အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် သူမ
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:43 AM
Set thar lote BlackDream yay..,
Your IQ is so high and I cant barely to reach it. But it is good to read your Post as it's simply UNIQUE.
Keep Roll on, Baby..,
ပထမတော့ ကိုယ်ပါမှားပြီး အတူးနေရာမှာဝင် ပျော်မိတယ် နောက်တော့မှ သူက ငယ်သူငယ် ချင်းချစ်သူလေးကို သူများလက်ထဲ ထည့်ဖို့ ကူညီ နေတာကိုး စာရေးသူရဲ့ ရေးသားချက်လေး ကတော့ စာတပိုဒ် ချင်းမှာ ခံစားချက် တခုခြင်း ဆီပေးသွားတယ် အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျာ...
တစ်ပိုဒ်ကို တစ်မျိုးစီနဲ့ တော်တော်လေးကောင်းတယ် အစ်ကိုရေ။ အစိမ်းရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ စာတွေထဲက
ဆိုတဲ့ တစ်ပိုဒ်ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။
စာအေ၇းအသားတွေကောင်းတယ်နော် မိုက်တာ စာလေးတွေက တကယ့်အဖြစ်အပျက်လိုပဲနော် အပြင်မှာ ကောရှိလား ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ ဇာတ်ထဲကို မျှောသွား သိလိုပဲနော် အားပေးတယ်
အတွေးတွေ အရေးတွေ ကောင်းလှချည်လား ညီလေးရး-)
ဖြစ်တက်ပါတယ် က ဖြစ်လာတဲ.အချိန် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလည်း လူတိုင်းမသိကျဘူး...
ရင်ဆိုင်ဖို. အင်အားတွေ ရှာဖို. အကြံပေးလိုက်သလိုပဲ ..
ပို့ စ်တစ်ပုဒ်လုံးကိုကြိုက်တယ် အစိမ်းရောင်နဲ့ ရေးထားတဲ့စာသားလေးတွေ အရမ်းကောင်းတယ် ကူးသွားပြီး လိုတဲ့နေရာမှာသုံးမလို့ :P
စကားလုံးတွေ နဲ့ ပြောပြလို့ မရပေမယ့် ရင်ထဲမှာ ခံစားနေရတဲ့ အတူးတစ်ယောက် အိပ်မက်တွေကို
ကဗျာရက် ခဲ့တယ် .. ၊ အားပေးလျှက်ပါ သူငယ်ချင်း ။
ကြည့်ချင်လို့လောကထဲကို ခြေစုံပစ် ၀င်လာတယ်ကွ...း)
(၂) သူမရဲ့ သင်းပျံ့တဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့လေးတွေ မရနိုင်တော့တဲ့နေ့မှာ ကျွန်တော်သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုပါလားကွ ...ထိလောက်တယ်နော် သယ်ရင်းရေ အဲကောင်မလေးတော့ ဟိဟိ...း)
(၃) ဟုတ်တယ်ကွာ အရာရာတိုင်းမှာ ဒါပေမယ့်ဆိုတာရှိလို့ပေါ့ကွာငါတို့တွေလဲ........အဟက်ဟက်...း)
(၄) ဒီလမ်းကိုလျှောက်ရင်ပျော်တယ်ဆိုတော့လည်း ဆက်လျှောက်ပေါ့သယ်ရင်းရာ ကိုယ်တိုင်ကကျေနပ်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်...း)
(၅) တကယ်ကောမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်သွားပီလားကွ ဂျုးငယ်က...း)
ဘုရားသခင်က လူသားတို့ အကျိုးငှာ လောကအား “အချစ်” ဆိုသောအရာဖြင့် ကြိမ်စာတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးကွ ...လူတွေလက်ခံတဲ့အယူအဆတွေလွဲမှားနေကြတာပါကွ...
ဟုတ်တယ်ဟုတ်...လျှာရှည်ကြည့်တာနော် ...သယ်ရင်းအတွေးတွေကတော့ တကယ်ဂွတ်ထပဲကွ ..အဆင်ပြေပါစေကွာ...း)
အယ် အတူးက အဖြည့်ခံကြီးလား ဆိုးပါ့....
နောက်တစ်ခါ အဲလို မရေးနဲ့
အတူးက အားကျမခံ နောက်တစ်ယောက် ယူတယ်လို့ရေး
ညီလေး ရေ နောက်ကျသွားတယ် ...
ဒါပေမယ့် သေချာ ဖတ်ရှု ခံစား သွားပါတယ် ...
တစ်ခုခု ကို နားလည်နေသလိုပဲ ...
မသိပါဘူး အတူးကများ သတိုးသားများလာလို့ နောက်ဆုံး သတိုးသားလောင်းတောင် မဖြစ်ဘူး
ဟီးဟီး အားကျမခံ တစ်ယောက်နဲ့တွဲပြလိုက်
သယ်ချင်းက အရေးအသား တယ်မိုက်ပါလား....
အချစ်ဆိုသာပေးဆပ်ခြင်းဆိုတာကို အတူးက သက်သေခံသွားတယ် ။
ဘာရေးရမလဲလို့ စဉ်းစားစရာ မလိုဘူးဆိုရင် ဝေဖန်ခဲ့မယ်နော်...ရိုးရိုးလေးပဲ... အချစ်နဲ့ စစ်မှာ မတရားတာ မရှိဘူးတဲ့။ သေချာတာ တစ်ခုက အရာရာတိုင်းမှာ “ဒါပေမယ့်” ဆိုတာရှိတယ်။ အဲလိုပဲ အချစ်ဆိုတာလည်း ဘုရားသခင်က ချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့ “ဒါပေမယ့်” တစ်ခုပေါ့။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဘယ်သူကို သနားရမလဲ မသိဘူး။ ရေးချင်လို့ ရေးတာကို၊ ဖတ်ချင်တဲ့သူက ဖတ်ပြီး...ရသတွေ မြောက်နေတယ်။ မျှဝေခံစားဖို့ ရင်ဘတ်ထဲက အဲဒီလိုခဏခဏထွက်ကျဖို့လိုတယ်။ ဒါမှလည်း “ဂျူးငယ်” ကြားမှာပေါ့။ များများ ရေးနိုင်ပါစေ။ “ဒါပေမယ့်” ဟိုတစ်ပုဒ်လို “အပေးအယူ”တွေတော့ မလုပ်နဲ့အုံး။ အဟဲ။
အစ်ကိုကျွန်တော်ဒီပိုစ်လေးကိုဖတ်ပြီးမနေနိုင်ဘူးဗျာ။ ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုစာဖတ်လိုက်ရတော့ ကျွန်တော်ရင်ထဲအရမ်းမကောင်းဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာစိတ်မခိုင်ဘူးဗျ။ ဘာပဲပြောပြောအရမ်းကောင်းပါတယ် အစ်ကို လေးစားပါတယ်။
ငါ အလုပ်ကနေဖတ်လို့ comment ရေးမသွားတာပါဟ
ကဲ.... comment ရေးပြီဟေ့.......
မျက်လှည့်ပြတဲ့ စာရေးဆရာတော့ ချီးကျူးတယ်ဟေ့
ငါတောင် ဖတ်ရင်းနဲ့ နည်းနည်းကြောင်သွားတယ် ဘာဖြစ်တာလဲလို့...... နောက်မှ မောင်တူးက အရန်လူကိုးကွ........ ငါတော့အဲဒီ ဘ၀ကို လုံးဝမကြိုက်
ဒါပေမယ့် အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတယောက် အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့တာတော့ ငါတွေ့မို့ လက်ခံတယ်ဟေ့ အတော်ဆိုးတဲ့ ဘ၀ပါကွာ....မြုံစိ...မြုံစိနဲ့....
ဒီလိုကောင်တွေကို ကောင်မလေးတချို့က သိသိကြီးနဲ့ အသုံးချတာပါကွာ........
အရေးအသားကတော့ စံပဲဟေ့ .. အားရတယ်ဗျာ ..
အားပေးနေပါတယ် .. ;-)
ထပ်လာဖတ်တယ် ဗျာ ကြိုက်လွန်းလို့ :D
it is simply touching
ur post have really touched my heart. good job. I also thinking of writing short nobles or noble but somehow i am not good enough like u do. I really appreciate it and envy you for writing suchagood word. I really really really appreciate ur arts. i couldn't explain how envy i am to u. :)
တကယ်သဘောကျတယ်။စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေက တကယ်ထိမိတယ်။ ကြွေတယ်ကွာ......ဆက်ပြီး ဒီလို အရေးအသားတွေကို မျှော်နေမယ်နော်။ ကျေးဇူး အခုလို အရေးအသားကောင်းတွေ ဖတ်လိုက်ရလို့။
"" SHE LOVES HIM MORE THAN ANYTHING IN THIS WHOLE WORLD ""
DOES ANY BODY CARE!
blackdream ရေ အလုပ်တွေများနေတဲ့ကြားက ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို မရအရ ပြီးအောင် ဖတ်သွားပါတယ်။ စဖတ်ကတည်းက ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘဲ တစ်ခုခုဖြစ်တော့မလားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဖတ်နေမိခဲ့တယ်။ “ငါ့အိပ်မက်တွေနဲ့ ကဗျာတွေရက်ခဲ့တာကိုး…”တဲ့။ အစကနေအဆုံး စာဖတ်သူကို ဆွဲခေါ်သွားပုံတွေ အဖွဲ့အနွဲ့တွေကတော့ blackdream ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဘာမှပြောစရာ မရှိအောင် ကောင်းတယ် မောင်လေးရေ...
Dream Luver said...
တကယ်အဖြစ်အပျက်လေးတခုရှိခဲ့သူတဦးအနေနဲ့တော့ .. ရှင် ရေးတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ ဒီ ..တခုကတော့အတိုက်ဆိုင်ဆုံးပဲမို့
ကျွန်မ မျက်ရည်လည်ခဲ့ရတဲ့ဒီည ..
အားတင်းပြီး ပြုံးနေရတဲ့ သံတမန်။..
ဟောဗျာ.... ကျွန်တော်နှင့်သူမ(၁)(၂) ကိုဖတ်ပြီး ရေလည်လန်းသွားတယ်ဗျာ...အမိမြေနဲ့ဝေးလို့ မြန်မာဝတ္တုတွေနဲ့ဝေးနေချိန်မှာ...ခင်ဗျားရဲ့ဇာတ်သိမ်းဟာစုံထောက်ဝတ္တုတွေလို....နောက်ဆုံးမှာ လုပ်ချလိုက်တာပဲ...ဖတ်သူကိုစဉ်းစားစေတဲ့ idea လေးကိုသဘောကျတယ်ဗျာ...
ကိုလင်းထက်ရဲ့ ကွန်မန့် ဖတ်ပြီးမှ
aa yan ko read loe kaung tal
ako sar tawe read ya tar ayan kg par tal....
arr pay nay mal nor ako...........
nyi lay mat thar twar tal ako sar tar tawe like loe....